Akwụkwọ AJ Kieffer na Martech Zone |
Edemede site na AJ Kieffer
AJ bụ Onye isi njikwa nke Ahịa Ahịa na Onye nduzi. A transplant si mgbasa ozi ụlọ ọrụ ụwa, AJ bụ ahụmahụ ahịa strategist omiiko banyere unlocking na rụọ ọrụ n'ji nghọta.
Anyị nọ n'ọgbọ ozi buru oke ibu. Site na data juputara oge niile, ọbụlagodi ndị na-ere ahịa dijitalụ kachasị njọ nwere ike ịda mbà. Don'tchọghị azịza nye ajụjụ ọ bụla - naanị ị chọrọ igodo iji kpughee uru gị na mkpọsa na mmemme gị. Need chọrọ ọrụ nke ahaziri, ịnweta ma rụọ ọrụ nke ọma. Na-ewebata Newzọ Ọhụrụ iji chọpụta ma kesaa nghọta na ohere dị na onye na-eduzi Searchlight Conductor na-ekpughere ụlọ ọrụ ọhụrụ maka atụmatụ anyị.